Mwt Methyltrienolone Mpempe (965-93-5) hplc ma98% | AASraw Fat Loss
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Methyltrienolone ntụ ntụ
SKU: 965-93-5. Category: Ọla abụba
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Methyltrienolone ntụ ntụ (965-93-5), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Methyltrienolone ntụ ntụ nwekwara ike ịbụ onye na-eme ihe na-emekarị ihe na-eme ka steroid na-eme ihe. Methyltrienolone achọrọ obere obere doses iji hụ nnukwu uru na nha na ike. Methyltrienolone anaghị atọghata ka estrogen, ma ọ nwere ọrụ mmemme nke nwere ike ime ka mmetụta nke estrogen dịkwuo.
Methyltrienolone ntụ ntụ video
Methyltrienolone ntụ ntụ isi Characters
aha: Methyltrienolone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H24O2
Ọbara arọ: 284.39
agba: Ìhè odo crystalline ntụ ntụ
Raw Methyltrienolone ntụ ntụ ojiji na steroid usoro
A na-akpọkwa methyltrienolone ntụ ntụ dịka Metribolone (CAS 965-93-5), MT.
Raw Methyltrienolone ntụ ntụ Usage
0.5 milligrams (mgs) gaa na 5mgs kwa ụbọchị nkewa, wepụ 3 ka izu 4 jiri ya.
Ịdọ aka ná ntị na Methyltrienolone raw ntụ ntụ
Methyltrienolone raw ntụ ntụ dị nnọọ androgenic ma yikarịrị ka ọ ga-eme ka ntutu isi na ọnyá siri ike na ndị na-enwe mmetụta ndị a. E nwere ihe ize ndụ maka gynecomastia n'ihi ụbụrụ na-emepụta ihe nke Methyltrienolone raw ntụ ntụ. Nchegbu kasịnụ na Methyltrienolone raw ntụ ntụ bụ ike imeju ya.
Methyltrienolone raw ntụ ntụ (MT) na-emepụta ahụ ike ma na-esure abụba. Na steroid nke na-ejikọta aka na AR ga-akpali ọtụtụ nkwanye muscle ma gbaa ọtụtụ abụba. Ma ọ bụ ihe dị ike, nke na-egbu egbu, nke na-adịghị aromatizing steroid.
Methyltrienolone Azu uzuzu (CAS 965-93-5)
Raw Methyltrienolone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Methyltrienolone ntụ ntụ (CAS 965-93-5) site na AASraw
AAS raw na-enye ọcha 98% Methyltrienolone raw ntụ ntụ ka n'okpuruala labs maka ogwu nnukwu uru ojiji ..
Methyltrienolone Raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka